Published 25/02/2015 | By Pyay City
ထူးကြီး- မူးကြီးရေ ပြည်မြို.မှာတော. လူမည်းကြီးသောင်းကျန်းနေသတဲ.
မူးကြီး- အေးငါလဲ ကြားသဟဲ. စုန်းလိုလို ၊ ကဝေလိုလိုဆိုပဲ
ထူးကြီး- ဒါတင်ဘယ်ကသေးမလဲ ကိုယ်လဲပျောက်နိုင်သေးသတဲ.
မူးကြီး- ပြေးလိုက်တာလဲအတော်မြန်တယ် ၊ ခြေထောက်နဲ.မြေကြီးတောင်မထိဘူးတဲ. ဘိုးတော်လား
ထူး- ဘိုးတော်က မိန်းမတွေ ကို၊ဟိုကိုင်ဒီကိုင်ကိုင်မလားကွ
မူး- ခုန်ပျံကျော်လွှားလဲရတယ်တဲ. အိမ်တစ်လုံးကိုတောင် ခုန်ပျံကျော်လွှားသွားနိုင်တယ်ဆိုပဲ
ထူး- ငါတော. အဲဒိလူကို မြန်မြန်မိပါစေဆုတောင်းတယ်ကွာ ၊ ဒါမှ ငါတို.မြန်မာ.အားကစား
အဆင်.အတန်းမြင်.မားလာမှာ Continue reading →
ဗုဒ္ဓသာသနာ ဖွံ့ဖြိုး စည်ပင် လာတော့မည့် သရေခေတ္တရာ ပျူရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု
Published 15/11/2013 | By Pyay City
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်မြို့၏ တောင်ဘက် ၅ မိုင်ခန့် အကွာတွင် အေဒီ (၄) ရာစုမှ အေဒီ (၅) ရာစုအတွင်း စည်ပင်ထွန်းကားခဲ့သော သရေခေတ္တရာ ပျူမြို့ဟောင်းရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပျူခေတ်မြို့ဟောင်း သုံးမြို့ဖြစ်သော (၁) ဟန်လင်း၊ (၂)ဗိဿနိုး၊ (၃) သရေခေတ္တရာ တို့ရှိသည့်အနက် သရေခေတ္တရာပျူမြို့ဟောင်းသည် အကြီးဆုံးနှင့် ရှေးအကျဆုံး မြို့တော်ဟောင်းဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားရာ အချက်အချာဒေသကျသော ဒေသဖြစ်ခဲ့သည်။
ဖိနပ်နဲ.မတော်လို့ ခြေဖနောင့် လှီးသူများ
Published 07/09/2013 | By Pyay City
ယနေ.မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးမြို.တော် ရန်ကုန်တွင် မြို.တွင်းကားကြပ်မှု ၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို.မှုများ ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ပေါ်နေသည် ။ ယခင်ကအိမ်မှအလုပ်သို. လေးဆယ်.ငါးမိနစ်ခန်.လိုင်းကားစီးကာသွားလျင်ရောက်သောခရီးကို ယခုအခါ တစ်နာရီခွဲ ၊ နှစ်နာရီခန်. အချိန်ယူကာ သွားလာနေရပေသည် ။